Ọtụtụ ụmụ agbọghọ na-anwa ịmụ akwụkwọ n'ụlọ, ma, dịka iwu, anaghị enweta ọzụzụ kwesịrị ekwesị. Gbanyụọ ọrụ ụlọ na-adịghị agwụ agwụ, nke nwere ike ịdọpụ uche ya, ekwentị, Intanet, ịdị umengwụ - ihe ọ bụla. Otú ọ dị, enwere pasent ole na ole nke ndị mmadụ nwere ezigbo ọchịchọ, ndị nwere ike ịchọta mgbatị ụlọ. Site n'isiokwu a, ị ga-achọpụta ma ị nwere ike ịmalite elu ụlọ na ọnọdụ ndị dị mkpa maka nke a.
Ọ ga-ekwe omume ibudata mkpọtụ n'ụlọ?
Dị ka ọ dị mma, iji kpochapụ ihe ndị ahụ, belata olu nke akwara abụba ma gbasaa oke ahụ ike ha, ị chọrọ nri zuru ezu na protein zuru ezu na opekempe nke carbohydrates na-abaghị uru, nakwa iji ihe dị arọ. N'ezie, o yighị ka ị nwere igwe Smith na ụlọ, ma onye ọ bụla nwere ike ịzụta setịpụrụ dum, ọ ga-ezuru maka mmalite.
Ya mere, olee ọnọdụ maka ọzụzụ ọzụzụ nke ọma:
Tupu ị na-amanye elu n'ụlọ, nwa agbọghọ ahụ kwesịrị ịṅa ntị na nri ya , wepụ ntụ ọka niile, ụtọ na abụba sitere na ya, ma gbanwee gaa na nri dị ka anụ + akwụkwọ nri + ọka, tinyekwa nsen na mmiri ara ehi na nri.
Na-enye ya oge maka ọrụ. Ọ ga-abụ ihe dị ka 30-60 nkeji n'ụbọchị, ugboro atọ n'izu. Ọzụzụ site na ikpe ruo n'ikpe na-enye nanị ndakpọ olileanya, mana ọbịbịa na-emepụta ọrụ ebube na ọnụ ọgụgụ ahụ.
Maka oge ọzụzụ, gbanyụọ ekwentị, jụọ ụlọ ka ọ ghara ịdọpụ gị, etinyeghị ihe ọ bụla ọzọ karịa egwu. Na mgbe ijikọta ọzụzụ na ọrụ ndị ọzọ nke ụlọ (na-agba ọsọ na-eme ka mmiri sie ike, ị gaghị enwe ike ịrụpụta ihe ọ bụla, ma ọ bụ ọbụna mee ka ọzụzụ ahụ ruo ọgwụgwụ).
Mee atụmatụ nke ihe omume doro anya ma ghara ịda mbà n'etiti. Echefula na na mgbakwunye na mmemme oge ochie na mkpịsị ụkwụ, ịchọrọkwa ikpo ọkụ na mbido - na njedebe nke nnọkọ ahụ.
Malite na listi mgbatị - detuo ọnụ ọgụgụ nke ịbịaru, ụbọchị, omume na ọdịmma. Mgbe ọ na - apụta na mmemme a rụrụ ngwa ngwa, ma ọ bụ mee ka ọnụ ọgụgụ nzaghachi, ma ọ bụ (nke ka mma) - ịdị arọ nke ịdị arọ nke ị na - eji.
Ya mere, anyị lere anya iji mepụta ọnọdụ kwesịrị ekwesị iji kpoo ihe ndị ahụ n'ụlọ. Ihe ndị a anaghị achọ, ma ndụmọdụ ndị a chọrọ n'aka gị ga-enyere gị aka ịzụ, ọ bụghị oge gị.
Ọ bụrụ na i meelarị ọnọdụ niile maka onwe gị, tupu i nwee ike ibudata mkpọtụ n'ụlọ, ị nwere ike ịmalite mmemme ndị ahụ. Imirikiti n'ime ha maara gị ogologo oge, n'ihi ya ị gaghị enwe ihe ọ bụla dị iche.
Malite site na ikpo ọkụ: na-agba ọsọ maka ebe 8 nkeji. Nkeji abụọ nkeji na-agba ọsọ dị ka ọ dị na mbụ, nke abụọ - ya na akwa ahụ, nke atọ - ya na elu ikpu elu, nke anọ - etinye ụkwụ gị n'ihu.
Squats na dumbbells. Were oberebbells, tinye ụkwụ gị n'ogo n'ubu gị, gbanwee azụ gị. Jiri nwayọọ nwayọọ daruo ala, ghara ibute ikpere, na, mgbe ọ ruru n'isi ikpere 90 degrees, laghachi na nmalite. Tinyegharịa 3 na-abịakwute maka ugboro 15.
Na-eme ọgụ mgbochi, ma na dumbbells na aka. Ngụkọta nke 3 setịpụrụ 15 ugboro kwa ụkwụ.
Squats "Sumo" ("Plie"). Ụkwụ ya dị oke karịa ubu (nke ka mma, nke ka mma). N'elu ogwe aka ya dị ala n'ihu ya - ajuju dị arọ. Gaa nwayọ nwayọ, na-echekwa azụ gị, na mgbatị gị na-adọta azụ. N'ebe kachasị elu, rụọ ọrụ ole na ole na-agbanye elu na ala wee laghachi na nmalite. Ngụkọta nke 3 setịpụrụ 15 ugboro kwa ụkwụ.
Na njedebe, mee nkedo dị mfe, na-eru maka ụkwụ ọ bụla site n'ọkwá "ịnọdụ ala n'ala, ụkwụ aka nri n'akụkụ." Ọbụna omume ndị a dị mfe ga-ezuru iji rụọ ọrụ uru ahụ.
Ihe omume na wiil
Mgbatị tupu ọzụzụ
Kedu ka esi agba na mgbede?
Kedu ka esi anọdụ ala na twine n'ụlọ?
Ncha maka azụ
Omume maka aka nwanyi
Kedu ihe m ga-eme ka m wee ghara ịda ụkwụ?
Ọrụ na igwe ugbo nkwụsị
Ịzụ ọzụzụ akwara
Kedu ihe ị ga-agbanye jaket na ikpere?
Salad na mkpụrụ vaịn
Ego ole ka nwatakịrị ga-atụle na ọnwa 1?
Mmiri mmiri na Japan
Ndaji nke odo
Akụkọ kacha ọhụrụ na ndụ Kristen Stewart
Duck na quince
Refilling maka fucchose
Bank na aka aka aka
Kedu ka esi asa akwa akwa?
Gịnị ka Adriano Celentano na-eme ugbu a?
Ntụziaka maka ofe eghe na pearl barley
Kedu otu esi eme ka nwatakiri mee ihe omuma?